राजदुत आचार्य र कार्कीलाई मन्त्रीसरहको सुबिधा
काठमाडौँ । सरकारले दुई राजदुतलाई मन्त्री सरहको मर्यादा दिएको छ ।
मन्त्रिपरिषदको बैठकले भारतकालागि नेपालका आवासिय राजदूत निलाम्बर आचार्य र संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि नेपालका आवासिय राजदूत डा. अर्जुनकुमार कार्कीलाई नेपाल सरकारको मन्त्रीसरह मर्यादा कायम गरेको हो ।
सरकारको यो निर्णयपछि दुवै राजदूतले मन्त्रीसरह सुविधा पाउने छन् ।
मन्त्रिपरिषद बैठक : राहत र उद्धारलाई प्रभावकारी बनाउने सरकारको निर्णय
काठमाडौँ । लगातारको बर्षाले आएको बाढी पहिरोबाट ठुलो जनधनको क्षतिपछि आज मन्त्रिपरिषदको बैठक बसेको छ । आइतबार अपराहन्न बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सरकारका सबै निकाय र जनशक्तिलाई परिचालित गरि तत्काल राहत कार्य
मन्त्रिपरिषदले के के निर्णय गर्यो ? (सुचीसहित)
काठमाडौँ । यहि असार १९, २३ र २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका प्रमुख निर्णय सार्वजनिक गरिएको छ । १. बीउ विजनको किसिम, जातहरूको सूची नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरिएको
असार १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक
काठमाडौं । सूचना तथा प्रविधि मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता गोकुल प्रसाद बास्कोटाले असार १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेका छन् । मन्त्री बास्कोटाले सरकारका निर्णय सार्वजनिक गर्दै यस साताको
आषाढ ५ र ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय यस्ता छन्
काठमाडौं । सरकारले आषाढ ५ र ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय बिहीबार सार्वजनिक गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले निर्णय सार्वजनिक गरेका